KDE Plasma 5.15 ichatanga nekukurumidza, tarisa kuvandudza kwayo | Linux Vakapindwa muropa
Mune yazvino yekushandisa uye yekuita mushumo, KDE mushambadzi Nate Graham aburitsa zvimwe zve zvinonyanya kukosha kugadzirisa uye zvinhu zvitsva zvenguva yemberi KDE Plasma 5.15uyewo mukati KDE Kunyorera 18.12 uye KDE Zvimiro 5.51.
Zvino izvo kuvandudzwa kweKDE Plasma 5.14 kwave pedyo nekupedzisa, timu yekusimudzira iri kutarisisa kuyedza kwayo pane inotevera inotevera kuburitswa, KDE Plasma 5.15, ichiita akasiyana maitiro ekuvandudza mashandiro uye ichiwedzera mitsva maficha kune iwo ekutanga kunyorera uye kwavo zvinhu.
Zvinoenderana nemushumo waNate Graham, iri kuuya KDE Plasma 5.15 ichatanga kukurumidza zvishoma, zana mamiriseconds nekukurumidza kupfuura vhezheni yayo yapfuura. Pamusoro pezvo, KRunner haizoratidze zvakapetwa zveFirefox mabhukumaki uye iyo Konsole mbiri uye dhairekitori rekuona mawidhi zvichave nekubatana kuri nani nekhibhodi yekufambisa.
KDE Plasma 5.15 inovimbisa kuve nekuenderana zviri nani neGNOME kunyorera, kutanga nekushandisa chaiko kweiyo resize windows ne mouse cursor mune default Breeze theme.
Kune rimwe divi, iyo Plasma Tsvaga yekuvandudza ziviso widget ichagamuchira rutsigiro kuratidza iyo reset bhatani kana system reboot ichikurudzirwa mushure mekuvandudzwa.
Chekupedzisira, KDE Plasma 5.15 ichave ne yakagadzirirwa patsva nzvimbo yekutsvaga iyo Kickoff app kuita kuti iratidzike senge yekutsvaga munda uye izwi rekuti "Shutdown" richashandiswa mukati meye mushandisi interface, apo "Shut Down" isati yashandiswa, kunyangwe muchiSpanish, shanduko iyi haizove nemhedzisiro huru.
Graham anoshumawo kuvandudzwa kwakawanda uye zvinhu zvitsva zveKDE Zvishandiso 18.12 uye KDE Zvimiro 5.5, iyo yekupedzisira ichasvika muna Gumiguru 13, nepo KDE Apps 18.12 ichizosvika kusvika Zvita.
Kana iwe uchida kuona shanduko dzese dziripo mu KDE Plasma 5.15 uye inoenderana unogona kuona iro repamutemo kuburitsa pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » KDE Plasma 5.15 ichatanga nekukurumidza, tarisa kuvandudza kwayo
100 milliseconds ??? Chero katsamba kacho kakatadza kana kuti kakatadza, nei kuri iko kushandiswa kwemamirisoni zana (kwete kunyange hafu yechipiri) nekukurumidza? hapana aizoziva mutsauko.
Pindura kuti careare